Amanqaku kaMolly Clark Martech Zone |
Amanqaku ngu UMolly Clark
UMolly Clark nguMlawuli weNtengiso ku InMotionNow. Uneminyaka eyi-10 + yamava kwintengiso yedijithali, imisebenzi yokuthengisa, ukuhamba komsebenzi, isicwangciso kunye nophuhliso.
Iqela eliDala njani ukuba lenze iScardcard ukuze libonise ixabiso lalo kwi-C-Suite
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 22, 2021 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 22, 2021 UMolly Clark
Umxholo ophezulu wokuyila ubalulekile kwintengiso yedijithali. Ngamafutha entengiso ezenzekelayo, intengiso yedijithali, kunye nemidiya yoluntu. Nangona kunjalo, ngaphandle kwendima edlalwa ngumxholo wokuyila, ukufumana i-c-suite inomdla emsebenzini oya kuwo ngumceli mngeni. Ezinye iinkokheli zibona imfutshane yokuqala, kwaye uninzi lubona iziphumo, kodwa bambalwa kakhulu abayaziyo into eyenzekayo phakathi. Kuninzi okwenzeka emva kwezigcawu: ukubekwa phambili kweeprojekthi, ukulungelelaniswa kwezixhobo zoyilo,